Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu dilay magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaXildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu dilay magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamanka Hirshabeelle ayaa ku geeriyooday qarax garigiisa loogu xiray kaasoo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka oo lagu magacaabi jiray Cabdiweli Maxamed Ibraahim ayaa ku geeriyooday qarax gaarigiisa loogu xiray oo ka dhacay agagaarka maqaaxida London Gate oo taalla degmada Xamar Weyne.
Goob joogayaal ayaa Warbaahinta sheegay in qaraxan uu ku dhaawacmay qof kale oo gaariga la saarnaa xildhibaan Cabdiweli Maxamed Ibraahim isla markaana xildhibaankana uu geeriyooday.
Saraakiisha ciidamada dowladda ayaan ilaa hadda wax faah faahin ah ka bixin qaraxan lagu xeray gaariga Xildhibaanka.
Ma jirto cid sheegatay Weerarkan lagu dilay xildhibaan Cabdiweli, balse Al shabaab ayaa inta badan lagu eedeeyaa in uu ka dambeeyo qaraxyada noocaan oo kale ah.
Xildhibaan Cabdiweli Maxamed Ibraahin ayaa noqonaya xildhibaankii 4aad ee ka tirsanaa baarlamaanka Hirshabelle oo lagu dilo qarax.